မိုဆာလားရဲ့ နေရာကို အစားထိုးသွားရန် ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ကစားသမားနဲ့ ပက်သက်ပြီး လီဗာပူးပရိတ်သတ်တွေ ပျော်ရွှင်နေမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဝန်ခံလိုက်တဲ့ မာဖီ - xyznews.co
မိုဆာလားရဲ့ နေရာကို အစားထိုးသွားရန် ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ကစားသမားနဲ့ ပက်သက်ပြီး လီဗာပူးပရိတ်သတ်တွေ ပျော်ရွှင်နေမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဝန်ခံလိုက်တဲ့ မာဖီ
လီဗာပူး ကွင်းလယ်လူဟောင်း ဒန်နီမာဖီက the Reds တို့အနေနဲ့ မိုဟာမက်ဆာလား ရဲ့ နေရာကို ရေရှည်မှာ အစားထိုးသွားရန် အတွက် ပရီးမီးယားလိဂ် စတား တစ်ဦးကို ချိတ်ဆက်နေမှု အပေါ် အံ့အားသင့်မိတယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဆာလားဟာ လီဗာပူး နဲ့ စာချုပ်သက်တမ်း ၂ နှစ်လောက်သာ ကျန်တော့ပြီး လက်ရှိ အချိန်ထိ စာချုပ်သစ် အတွက် တစ်စုံတစ်ရာ သဘောတူညီမှု မရသေးဘဲ ဆွေးနွေးမှုတွေ ရပ်တန့် နေပါတယ်။
ဝက်ဟမ်း တိုက်စစ်မှုး ဂျရော့ဘိုဝင်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀က ဟူးစီးတီး ကနေ ဝက်ဟမ်းကို ရောက်လာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ခြေစွမ်းပြ ကစားနေတာကြောင့် လီဗာပူး နဲ့ အပြောင်းအရွေ့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း မာဖီ ကတော့ ဒီအပြောင်းအရွေ့ အပေါ် သိပ်ပြီး သဘောကျဟန် မရှိပါဘူး။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၁ ခုနှစ်က တစ်ရာသီအတွင်း ဖလား ၃ လုံး ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တဲ့ လီဗာပူး အသင်းရဲ့ ကစားသမား တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့သူ မာဖီက လီဗာပူး အနေနဲ့ အဓိက ဆုဖလားတွေကို ဆက်လက် စိန်ခေါ်သွားဖို့ အတွက် ဆိုရင် ဝက်ဟမ်းရဲ့ ဘိုဝင့် ဆီမှာ ဒီအတွက် လုံလောက်တဲ့ အရည်အသွေးတွေ ရှိမနေဘူးလို့ ယူဆနေပါတယ်။
မာဖီက “နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ပရီးမီးယားလိဂ် နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား တို့ကို ဆွတ်ခူးနိုင်ဖို့ အတွက် ပစ်မှတ်ထားနေတယ် ဆိုရင် ဘိုဝင်ဟာ ဒီအသင်း အတွက် အဓိက အခန်းကဏ္ဍ ကနေ ပါဝင်ပေးနိုင်တဲ့သူလို့ ကျွန်တော် မထင်ပါဘူး။ သူဟာ ဒီအဆင့်ကို မရောက်သေးဘူးလို့ ကျွန်တော် မြင်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် အပေါ် ဆက်လက် စောင့်ကြည့် သွားဖို့ လိုပါသေးတယ်။
ယာဂန်ကလော့ရဲ့ လက်အောက်မှာ လီဗာပူး အသင်းရဲ့ လူဝယ်ယူမှုတွေဟာ တကယ့်ကို ကောင်းခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော် ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘိုဝင်နဲ့ လီဗာပူးရဲ့ ကောလဟာလ သတင်းတွေကို ကျွန်တော် ကြားနေရပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကျွန်တော် အနည်းငယ်တော့ အံ့အားသင့်မိပါတယ်။
ကျွန်တော် ဘိုဝင့်ကို မနှစ်သက်တာကြောင့် ဒီသတင်းတွေကို အံ့အားသင့်မိတယ်လို့ ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ပွဲမှာ ကောင်းကောင်း အသားကျအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ သူ့ရဲ့ ခြေစွမ်း တိုးတက်ဖို့ အတွက် ဘယ်လောက်တောင် ဆန္ဒ ပြင်းပြနေသလဲ ဆိုတာ ပြသထားခဲ့ ပါတယ်။ သူဟာ ဝက်ဟမ်း အသင်းကို ရောက်လာပြီးနောက် ပုံမှန် တစ်နေရာစာကို ရယူနိုင်ခဲ့ပြီး ညာခြမ်းမှာ အကောင်းဆုံး ကစားနေပါတယ်။” လို့ ပြောသွားပါတယ်။
လီဗာပူးနဲ့ စာချုပ်သစ် မချုပ်ဆို ရသေးပေမယ့် ဆာလားဟာ ဒီရာသီမှာ အကောင်းဆုံး ပုံစံကို ပြသလျက် ရှိနေပြီး လိဂ်ပွဲစဉ် ၁၂ ပွဲ အပြီးမှာ ၁၁ ဂိုးထိ သွင်းယူထားခဲ့ပါတယ်။ မာဖီက ဘိုဝင်ဟာ လီဗာပူးကို ရောက်လာပြီးနောက် ဆာလားရဲ့ နေရာကို ရယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ level ကို မရောက်သေးဘူးလို့ ဆိုသွားပါတယ်။
မာဖီက “လီဗာပူးဟာ ဆာလား နဲ့ မာနေး တို့ရဲ့ အသက်အရွယ်ကြောင့် ကာလရှည် အတွက် ရည်ရွယ်ကာ တိုက်စစ် ကစားသမားတွေ အားဖြည့်သွားဖို့ ရှိနေတယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သာ လီဗာပူး ဆိုရင် ဒီကစားသမားတွေနဲ့ ခြေစွမ်း သိပ်ပြီး မကွာဘဲ သူတို့ မကစားနိုင်ချိန်မှာ ကောင်းစွာ ဖြည့်ကစားပေးနိုင်တဲ့ သူတွေကို ရှာဖွေသွားမှာပါ။
အကယ်၍ ဆာလားဟာ လီဗာပူးနဲ့ စာချုပ်သစ် မချုပ်ဘဲ ကလပ်ကနေ ထွက်ခွာ သွားတော့မယ် ဆိုရင် ကမ္ဘာ့အဆင့် level မှာ ရှိတဲ့ တစ်စုံတစ်ဦးကို ငွေကြေးများစွာနဲ့ ခေါ်ယူသွားရမှာပါ။ လီဗာပူး ပရိတ်သတ်တွေ အနေနဲ့ ဆာလားရဲ့ နေရာ အတွက် ဘိုဝင်ကို ခေါ်ယူကာ အစားထိုးလိုက်မယ် ဆိုရင် သူတို့ ကျေနပ်နေမယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်မိသလား? ကျွန်တော်ကတော့ no လို့ပဲ ပြောသွားမှာပါ။”
Previous Article ယူနိုက်တက် နည်းပြသစ် ခန့်မှန်းမှုများ ၊ FIFA The Best စကာတင်တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
Next Article အက်ဇ်ပီလီကွီတာ ကို တမင်လုပ်ခဲ့တာလို့ ဝန်ခံပြီး ဒါမျိုးထပ်လုပ်ဦးမှာပဲလို့ ဖွင့်ပြောလာတဲ့ ဇလာတန်